Hydroxyl: ihe ọ bụ, njirimara, nhazi ya na arụmọrụ ya na ikuku | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu hydroxyl Ọ bụ nke mejupụtara atom atom na hydrogen atọm ma yie molekul mmiri. Enwere ike ịchọta ya n'ụdị kemịkal dị iche iche dịka n'otu, ion ma ọ bụ ihe egwu. N'ihi na ndị niile na-amụ organic onwu, ịmata mmeghachi omume na mkpa nke otu a atọm bụ isi. Ọ ga - enwekwa ike ịmekọ ihe dị mkpa na carbon atom, ọ bụ ezie na ọ nwekwara ike iji sọlfọ na phosphorus mee ya.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara nke otu hydroxyl yana mkpa ọ dị na kemịkalụ kemịkalụ.
2 Nhazi nke otu hydroxyl
3 Oyiyi na oru ha
4 Otu Hydroxyl na meteorology
Mgbe anyị nyochachara ndị hydroxyl ahụ site n'echiche nke kemịkal inorganic anyị ga-ahụ na ọ na-esonye karịa ka ion. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụdị eriri dị n'etiti ya na ọla abụghị ihe ọghọm, kama ọ bụ ionic. Maka nke a, otu hydroxyl abụrụla ihe dị mkpa na-enyere aka ịkọwapụta njirimara na mgbanwe nke ọtụtụ ogige.
A na-etinye otu hydroxyl na radical nke akọwapụtara cjiri leta R ma ọ bụrụ na ọ bụ alkyl ma ọ bụ jiri mkpụrụedemị Ar ma ọ bụrụ na ọ dị ụtọ. Ihe m maara nke ọma gbasara sayensị bụ ihe na - eme ka otu hydroxyl gbakwụnyere na molekul nke ọ jikọtara. A na - achọta azịza kachasị mma na ọmụmụ nke proton ya. Nke ahụ bụ na ntọala siri ike nwere ike ịpụpụ proton iji mee salts. Nke a nwekwara ike iso ndi ozo gbara gburugburu ndi ejikọrọ na ha site na njikọ hydrogen. Na mgbakwunye, ihe kachasị mkpa banyere otu hydroxyl bụ na, ebe ọ bụla ọ dị, ọ nwere ike ịnọchite mpaghara nwere ike ịpụta mmiri.
Nhazi nke otu hydroxyl
Otu hydroxyl abụrụla ihe igwe na-atọ ụtọ site na echiche nke kemịkalụ kemịkal. Igwe mmiri ahụ dị nkuku dị ka boomerang. Ọ bụrụ na anyị bee otu n’ime nsọtụ ya, nke pụtara otu ihe ahụ na iwepu proton, ọnọdụ dị iche iche nwere ike ime. Igwe mmiri bụ gbanwee hydroxyl radical ma ọ bụ hydroxyl ion. Agbanyeghị, ha abụọ nwere gearịị linearị molekụla ma ha abụghị igwe elektrọnik.
Njikọ ndị a niile bụ n'ihi na ha gbadoro ụkwụ na atọ iji nwee ike ịnọ kwụ ọtọ oge niile. Otu abụghị ụdị na ngwakọ orbitals. Igodo maka hydroxyl ga-ekwe ka ụmụ irighiri ihe dị iche iche jikọta ibe ha chọrọ agbụ hydrogen. Ihe njikọ hydrogen ndị a esighi ike n'onwe ha, mana ka ọnụọgụ nke isi mmalite na ọnụọgụ nke hydroxyl dị iche iche na-abawanye, mmetụta ya na-amụba. A na-egosi mmụba a na ọnụ ọgụgụ nke njikọ hydrogen na njirimara anụ ahụ nke onyinye ahụ.
Hydrogen agbụ chọrọ ka atọm ahụ dịrị ibe ha. Enwere ụfọdụ mkpụrụ oxygen nke otu hydroxyl nke a ga-ahaziri n'ụzọ nke na ọ nwere ike iwepụta usoro ziri ezi na hydrogen nke otu nke abụọ. Nke a dịtụ mgbagwoju karịa mana ọ na-eme kwa oge. N'ụzọ dị otu a, nhazi ọnọdụ a kapịrị ọnụ gbasara mbara igwe sitere na ihe na-eme n'ime usoro nke DNA molecule. Nke a na - eme n’etiti ntọala nitrogenous mejupụtara DNA.
Anyị nwere ike ịkpọ ọnụọgụ hydroxyl dị iche iche ihe jikọrọ ya na njikọ nke mmiri maka molekul. Anyị ga-etinye ihe atụ iji ghọta ya nke ọma. Sugar, obu ezie na o nwere odidi nke hydrophobic, ebe o nwere otutu ndi hydroxyl, eme ka ọ bụrụ ezigbo soluble na mmiri.
Oyiyi na oru ha
Otu hydroxyl na ion dị yitere ma nwee ihe kemikal dị iche. Hydrogen hydroxyl bụ ntọala siri ike ma na-arụ ọrụ site na ijide proton. Ọ bụrụ na anyị na-amanye ya, ọ nwere ike ghọọ mmiri. Nke a bụ mmiri mmiri na-ezughị ezu nke na-ebu ebubo na-adịghị mma ma chọọ proton iji mezue. N'aka nke ọzọ, ebe ọ bụ na ndị hydroxyl ọ dịghị mkpa weghara proton iji wuchaa ya na-akpa àgwà dị ka ihe na-adịghị ike isi. O nwere ike inye onyinye proton ọ bụ ezie na ọ na-eme ya megide ntọala ndị siri ike.
Positive nuclei bu atoms na molekul nke n’eri site na elektrọnik nke na - aruputa ebe ha na - acho ihe mmuta.
Otu Hydroxyl na meteorology
Anyị maara na ọ na-arụ ọrụ dị ka ihe na-ehichapụ ikuku n'ikuku ikuku ndị ọzọ. Anyị maara na ndị hydroxyl otu bụ isi njikwa nke methane ịta. Methane gas bụ griin haus gas nke karịrị naanị na ịta ahụhụ site na carbon dioxide na ntinye aka ya na okpomoku ụwa. Ọ bụ ezie na achọtara gas methane dị ntakịrị na mbara igwe, ọ nwere ikike idowe oke okpomọkụ karịa carbon dioxide.
Enwere nyocha ohuru nke otu onye NASA postdoctoral duziri nke gosiri na hydroxyl radicals na-emegharị onwe ha na enwe ike ijigide ọnọdụ ikuku nke ikuku mgbe niile. A na-echekwa uche a ogologo oge ọbụlagodi na ikuku methane na-abawanye. Ya mere, ịghọta ọrụ hydroxyl dị mkpa iji ghọta ndụ bara uru nke methane na ikuku.
Ndị ọkà mmụta sayensị ekwuola na ịba ụba na ikuku nke methane gas nwere ike ime ka ọnụ ọgụgụ nke hydroxyl radicals belata na ụwa. N'ụzọ dị otú a, ndụ bara uru nke methane ga-agbatị oge, nsogbu nke ga-agbakwunye na okpomoku ụwa. Site na ime ka ndụ nke methane dị ogologo, anyị enweghị ihe ga-ehichapụ ikuku. Achọpụtala ihe ndị bụ isi nke hydroxyl na methane na otu ha si emeghachi omume. Ntughari nke otu a na - eme mgbe methane mebiri ma mezie mgbanwe na ọnụnọ gas ndị ọzọ. Igwe mmiri hydroxyl bụ nke kwụsiri ike karịa oge. Ha aghaghi ila n'iyi mgbe o metere methane.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere otu hydroxyl na mkpa ya niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Hydroxyl